Waxa Curiyay Mohamed Hirad August 31,, 2007 Gabaygan waxa aan tiriyay bishan aynu ku jirno ee August 26 keedii. Ujeedada maansadu waa hoga tusaalayn iyo talo aan tolkay u gudbinayo. Waxa ii muuqatay in dagaalka maanta ka socda gudaha Soomaali Galbeed oo ah mid aan Soomaaliyi u dhammayni uu yahay mid lagu halaagmaayo. Waxa cad in gumeysiga xabashida iyo tacadiyadooda lagaga hortegi karo oo keliya dagaal loo dhan yahay iyo midnimo. Sida hadda muuqata dagaalkan waxa xooggiisa keli ku ah Maxamed Subeer. Taas oo ay caddahay sida cadceedda in ay ku heermayaan haddii aanay isdaba qaban.
Waxa intaas dheer xilliga maanta Soomaaliyi ku jirto oo ah mid ay u qaybqaybsan tahay reero iyo weliba Itoobiya oo kala daadsanaantaas awgeed maanta gacanta ku dhigtay Soomaali oo dhan. Caqli marka ma’aha in la yidhaa Itoobiyada noocaas ah baan qaab qabiil kula dirirayaa. Waxa ay maansadu reer tolkay oo dhulka aanu wadaagno usoo jeedinaysaa in xilligan maanta lagu jiro aanay dan ahayn in dagaal la galo, balse loo baahan yahay in xeel iyo garaad la isticmaalo. Horaa loo yidhi: colka wadhaf ma lagu dayay ee waxa ay ila tahay in bal maanta nabad wax lagu raadiyo, islamarkaanna la isdiyaariyo, Soomaalina la isla doonno. Waxa weliba loo baahan yahay in Soomaali Galbeed qowmiyado badan bay kula dhaqan tahay Itoobiya ee in laga shaqeeyo sidii loo heli lahaa midnimadeeda.
Xilligan waxa loo baahan yahay in dagaal aan hub ahayn lala galo Itoobiya. Kaas oo aynu xuquuqdeenna ku raadasanaynno innagga oo aan irbad u dhaafin qolyaha maanta gacanta ku haya Itoobiya. Waxa maanta dunida galbeedka ku dhaqan kumaankum u dhashay degaanka Soomaali Galbeed oo qaddiyaddeenna iyo xuquuqdeenna si hufan usoo bandhigi kara. Waxa la marayaa xilli wax kasta oo caalamka dacaladiisa ka dhaca lagu ogaan karo daqiiqado. Dagaalkaas ayaa aragtidayda ku habboon in aynu xilligan galno.
Waxa iyana waajib ah in aqoonta, horumarka iyo nolosha dadkaba lagu tala galo in wakhti kooban kor loogu soo qaado. Waa in mar walba lagu dedaalaa in aynu xoojinno midnimada. Waxa ay maansada Hanfade loogu magac daray tidhi iyada hogatusalaynaysa tolkay: Axmedow ninkii hoorriyaa talo ka hoostaaye
Habeen buu gudaa maalinimo ay hadhkii tahaye
Ma haleeelo waanada markii hoo la leeyahaye
Duul aan hareeraha wax jira halista dhawraynin
Oo hoos u deyahayn kobtii lagu halaagmaayo
Haadaan buu ka duulaa tashigaan loo hubsanahayne
Haddaan talada madax haybadliyo odayo haaneedin
Oo hadafka aayaha la rabo hilin cad loo jeexin
Waa hagar naftii laga galoo lagu hanqaarmaaye
Haddaan hoos u daadego waxay hibatay laabtaydu
Dhaaxay hubqaadeen tolkay hawlgal dirireede
Dhaaxay hujuumeen kufriga xabashna heereene
Dhaaxay habeen iyo dharaar weerar humayeene
Dhaaxaa waraabuhu hirqaday hanaddadoodiiye
Dhaaxay habkii dowladnimo u hanqal taageene
Ha yeeshee waxay ku hamiyeen haakah may odhane
Hannaankaa ka liitiyo siday u hindisoodeene
Haasaasahaa laga gartaa tay hadhow noqone
Afartaa ha’dii gabayga iyo erayadii Hawd dheh
Horay waxaan u soo joogay iyo hubantideedii dheh
Hawraarihii Samatar iyo Cali habkiisii dheh
Hadal kalana waa haatan iyo hawsha soconaysa
Halgankay wadaan reer Subeer waa habawnimo e
Hawiraad naftooday galeen hadimo xeel dheere
Xabashkaa hawada duulayee badaha soo haabtay
Ee Soomaalidii heellanayd halabsadee fuulay
Anaa keligay heensaynayoo soo hoggaan baraya
Waa riyo hurdadu keentay iyo qaar habsaanihiye Bal inay dagaalkay humeen lagu halaagmaayo
Ma hayaan hub iyo saanad iyo ciidan heeganahe
Ma hayaan cid hiil iyo wax qabad ay kula heshiiyeene
Kuwii hayb u xigay baan haddeer hoyga gelinayne
Dar baa magaca haaraamayoo kaaga haayiraye
Harti iyo Bah Geri baan hadayn ficil horseedkiise
Hareertaa galbeed qaar jiraan soo hinqanahayne Geri iyo jidwaaq la hubsayoo waa hamranayaane
Cawliyahan hub soo qaatay baan lagu hallaynayne
Reer Aw habaar bay wadaan nama haleeshaane
Hawiyaan hadh kuu jiidahayn waa ku hodayaane
Isaaq hadalkii daayoo dhammaan waa hundhudhayaane
Markii adiga hoobiye madfaca lagu huluuqsiiyo
Hambadii dhulkeennii ka hadhay wada hantiyaayaane
Annagana hamaansigaa xigaa waa habeen qudha e
Makaahiil halkuu naga xigaa haad ku dhacayaaye
Haro Xagarray kama foofiyaan geel horweynno ahe
Abraahiin hubkaa lala dhacay hibasho weyn reebye
Suldaankii hogtaa lagu fadhiyay haatan laga waaye
Raggii halaha lagu maali jiray waa hangool jabane
Arrintaa bal hoos ugu faqoo hubantideed sheega
Haddii kalase anigaa hungiyo ruux hadhiino ahe Afartaana haasaawe iyo hoga tusaalayn dheh
Tolkayaan sidii ila habboon halista sheegeed dheh
Ma hagradee waxa aan hamiyo waan u hurayaaye
Erey kalena waa hadal yaraan dib u habayn mooday
Geesigu mar buu hebed noqdaa calal hullaabtaaye
Hannaac iyo marbaa loo filaa hooge taag darane
Huluulaha mar buu kaga jiraa talo hogaankeede Hubka iyo mar buu tiiriyaa hootaduu sidayeM
Mar buu nacabka hoosaasiyaa nabad ku heesaaye
Qosol aan halkaa jirin mar buu kula hadaaqaaye
Halaq iyo mar buu sida abees hilinka seexdaaye
Iyadaan la hadahayn mar buu boqon haleelaaye
Cashaday habboon tahay ayuu hadimo gaystaaye
Oo guluf horseed uu ka yahay ma hadho reebaaye
Aniguna habkaasaan la rabay ma hurahaygiiye
Harraatida kufaartaan lahaa la herdankood dhaafe
Bulshadaa habsaantaan lahaa horumar gaadhsiiye
Harraadkay qabaan baan lahaa haro biyood jeexe
Hindisaha tacliintaan lahaa waa hirgelaysaaye
Hawlgal caafimaad baan lahaa hoyga ugu keene
Jidad wada haloosiya dhisaan ku hammiyaa jeere
Mar haddaad hormuudkii tihiyo madax hogaameedka
Degaamada hanuunshaan lahaa heel isugu keene
Hanti lagu gunneeyiyo habliyo hadallo suugaana Dadka naga hor jeedaan lahaa hadafka gaadhsiiye
Maamulkaa la hiifaan lahaa, habacsanaan diide
Hud-hudkaan dhaliil waxaan lahaa yaanu kuu heline
Wadaaddadan hubka qaatiyo kuwaa wada humbaalleeya
Ee gaaladaa haaribka ah u hanjabee maaga
Ee shacab ku hoobtaan madfaca lagu halgaadaayo
Iyo horor naftiisiyo halliga habar agoon haysa
Inay nagu hafraan maanan rabin qaar habaaraniye
Maansadan hanfade loo baxshee halawgu duulaayo
Huqda iyo hurgumadaa qalbiga iga hulaaqaysa
Hingilaanta uurkayga iyo, halasyadaa jiifa
Hal abuurkan aan qoray ma dhimin hugunka laabtiiye
Dulkaasaan ku hoorshee higsada, am I haaraama
_____________ We welcome the submission of all articles for possible publication on WardheerNews.com So please email your article today Opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the views of WardheerNews
Copyright � 2007Wardheernews.com